Mandrakitra Ny “Boky Nomerika” Amin’ny Teny Pisbi Ao El Salvador · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2017 4:47 GMT
Ity no vaovao faharoa momba ny tetikasanay, nahazo ny vatsy ho an'ny fikatrohana nomerika momba ny teny indizeny. Hamoaka lahatsoratra manasongadina ny fivelarany ireo nahazo vatsy izay tompon-kevitra tamin'ity tetikasa ity.
Nahavita tamim-pahombiazana ny fotoana fandraketam-peon'ny famoronana ny “boky kely” nomerika tamin'ny teny Pisbi izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa famelomana indray ny tenin'izy ireo ny CACAOPERA – Solontenan'ny Olona Teratany Kakawira ao El Salvador.
Ny tetikasa, izay vatsian'ny Rising Voices ara-bola dia nampandray anjara ireo mpikambana amin'ny sokajin-taona rehetra avy ao amin'ny fikambanana Winaka, izay mikasa hanamafy ny famantarana azy ireo sy ny vakok'izy ireo amin'ny alalan'ny teniny, ary nandray anjara tamin'ny atrikasa fiofanana momba ny fitsipiky ny fifandraisana, fampiasana fototra amin'ny fanandratam-peo sy ny fitantanana fitaovana nomerika, mampiasa ireo fitaovana natolotry ny Rising Voices ho fampandrosoana ny tetikasa.
Nandritra ny fotoana fandraketam-peo, nikarakara resaka natao an-tsoratra amin'ny teny Pisbi miaraka amin'ny dikan-teny Espaniola ireo mpandray anjara indizeny Kakawira. Ahitana fiarahabana fototra, teny momba ny fahitana izao tontolo izao, ny isa sy ny loko, ankoatra ny hafa ny lesona.
Nokarakaraina nifototra tamin'ny tahiry Pistaka Kirika Guina nataon'ny Vondrom-piarahamonina Cacaopera sy narindran'i Tata Miguel Amaya sy ireo mpikaroka Consuelo Roque sy Antonio Echeverria ao amin'ny Oniversiten'if El Salvador ny boky kely nomerika.
Mihevitra ny Filan-kevi-pirenena mpandrindra ny Indizeny Salvadaoriana (CCNIS), izay mamolavola ny tetikasa fa noho ny fanjavonan'ny teny tsy nosoratana sy tsy noraketina, tsy ho very harena goavana ara-kolontsaina ihany ny olombelona fa ho very fahalalana nentin-drazana ahitana ny teny teratany indrindra indrindra.
14 ora izayvondrom-piarahamonina